Kuyini ukumaketha kokuqukethwe? | Martech Zone
Noma besibhala ngokukhangisa kokuqukethwe isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi siphendule imibuzo eyisisekelo kubo bobabili abafundi bezentengiso futhi siqinisekise imininingwane enikezwe abathengisi abanolwazi. Ukumaketha kokuqukethwe yigama elithakazelisayo. Ngenkathi kutholakala umfutho wakamuva, angisikhumbuli isikhathi lapho ukumaketha kwakungekho okuqukethwe okuhambisana nakho. Kepha kunokuningi isu lokumaketha lokuqukethwe kunokuqala nje ibhulogi, ngakho-ke ake sibeke umbala ezungeze ibinzana.
Ukukhangisa Okuqukethwe ukuhlela, ukuklama, ukuthuthukisa, ukwenza, ukwabelana, ukukhuthaza nokwenza kahle okuqukethwe okwenzelwe ukuthola amakhasimende amasha, ukugcina amakhasimende amanje, nokukhuphula inani lobudlelwano bamakhasimende bamanje.
Kusebenza Kanjani Ukumaketha Okuqukethwe?
Bengisiza izinkampani iminyaka engaphezu kweyishumi ngamasu wazo wokumaketha okuqukethwe. Ngaphezulu ividiyo ebesiyisebenzisa ukusiza amaklayenti ethu ukuthi aqonde ukuthi sikusebenzisa kanjani ukumaketha kokuqukethwe ukushayela ibhizinisi sisebenzisa indawo yabo, ukusesha ukumaketha, ukumaketha imithombo yezokuxhumana, kanye nokukhangisa online.
Kukhona ukufanisa engikusebenzise isikhathi eside lapho kufikwa ukumaketha kuqhathaniswa nokukhangisa. Ukukhangisa kufaka isicupho esikhumulweni bese usiphonsa emanzini, ngethemba lokuthi inhlanzi izoluma. Ukumaketha inqubo yokuthola izinhlanzi, ukuhlaziya lapho ziluma, ukuthi ziluma ini, nokuthi zihlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba zilume.
Okuqukethwe okuqukethwe… i-whitepaper, okuthunyelwe kwebhulogi, ividiyo, i-podcast, i-infographic noma okunye okungenziwa ukuze kudluliswe umyalezo wakho. Kepha ukumaketha kokuqukethwe kudinga ukuqonda ukuthi izithameli zakho zingobani, yiziphi izindlela ezidluliswayo, ukuthola ukuthi izithameli zikuphi, ukwazi ukuthi ziyini izinhloso zazo, nokukhiqiza uchungechunge olufanele nezinhlobo zokuqukethwe ukuze kudliwe lawo mathemba noma amakhasimende. Kubandakanya izindlela zokwabelana nezokukhuthaza ozozisebenzisa ukufinyelela kuzo.
Amasu Wokumaketha Okuqukethwe
Amabhizinisi amaningi kakhulu adida ukumaketha kokuqukethwe njengokukhangisa. Abaqondi ukuthi kungani i-tweet, ukuvuselelwa kwesimo noma okuthunyelwe kubhulogi kungashayeli ukuguqulwa. Ukumaketha kokuqukethwe akwenzeki ngokushesha, ukumaketha kokuqukethwe kuyisu okudinga umfutho nesiqondiso ukuze ukwazi ukuqondisa izethameli ngenqubo yokuthenga, yokugcina noma ye-upsell. Njengokwe-chumming ukudoba, imvamisa kufanele ube nesisekelo sokuqukethwe ukukhuthaza kuzo zonke izindawo zokudla ukuze uhehe izethameli ozilandelayo.
Izinhlobo Zokumaketha Okuqukethwe
Abantu base-QuickSprout babhale okuthunyelwe okumnandi ku- izinhlobo zokumaketha kokuqukethwe nokuthi uzisebenzisa nini. Ngeke singene kuzo zonke izinhlobo, kepha ngithanda ukugxila ezingxenyeni eziyisi-6 zokuqukethwe esikubonile kusebenza kangcono kumakhasimende ethu ekwakheni imidiya ephethwe izinsiza:
Izihloko - ukwakha kumnandi umtapo wokuqukethwe ngezindatshana ezisezingeni eliphakeme eziphendula imibuzo ngamathemba, amakhasimende futhi zinikeze ubuholi bokucabanga ngaphakathi embonini kuyisisekelo sanoma iyiphi inkampani. Izinkampani zivame ukubheka ibhulogi njengecebo lesikhathi esisodwa, kepha kuyimali ephindaphindayo yemali engenayo nehlanganisa inzalo. Konke okuthunyelwe kubhulogi kungatholakala futhi kubhekiswe kukho nsuku zonke ukukhulisa ikhono lakho lokuheha, ukugcina nokuthengisa amakhasimende. Ukubhloga kwebhizinisi kunikeza ukudla kosesho nokwenhlalo okuzosebenza kukho futhi kubalulekile kuyo yonke inhlangano.
infographics - ukuklama umdwebo wolwazi ocwaningwe kahle othatha isihloko esiyinkimbinkimbi, usichaza kahle, futhi unikeze ifomethi ephathekayo engabukwa futhi yabelwe kumadivayisi amaningi nobuchwepheshe kube yinzuzo emangalisayo kuyo yonke inhlangano esike sasebenza nayo. DK New Media uyaqhubeka nokuba ngumholi kuleli su, esecwaningile, wathuthukisa, waklama, wasabalalisa, futhi waphakamisa ngaphezu kwe-infographics eyikhulu. Futhi, sihlinzeka ngamafayela asemqoka kumakhasimende ethu ukuze ihluzo liphinde liphinde liphindwe liphindwe kwezinye izethulo nezinto zokumaketha.
Amaphephandaba - Ngenkathi i-infographics iheha, sithole ukuthi amaphepha amhlophe ayaguqula. Ngenkathi izivakashi zesiza sakho zivame ukufunda nokwabelana ngokuthunyelwe ne-infographics, bavame ukuhweba imininingwane yabo yokuxhumana ukuze bangene ngokujulile esihlokweni abasicwaningayo. Inhloso yomuntu olanda iphepha elimhlophe imvamisa ukuthi bacwaninga ukuthenga ngokushesha okukhulu kakhulu. Ukwakha indlela kusuka kokuthunyelwe, i-infographic iye ekubizelweni esenzweni ekhasini lokufika ukuze ubhalise futhi ulande iphepha elimhlophe kube lusizo olukhulu kuwo wonke amaklayenti ethu.
Ukwethulwa - Ukwethembeka kokwakha, igunya, nokwethembela embonini yakho kudinga ukuthi wethule ngezihloko ezingqungqutheleni, kuma-webinar, noma emihlanganweni yokuthengisa. Ukubeka lezozethulo ku-inthanethi kuzingxenyekazi ezinjengeSlideshare, bese ukuzaba ngokuthunyelwe nemithombo yezokuxhumana kungathola ukunakwa okukhulu kontanga yakho.
Amavidiyo - Okumele ube nakho kumasu wokuqukethwe wenhlangano ngayinye ividiyo. Uma isithombe sisho amagama ayinkulungwane, amavidiyo anganikeza ukuxhumana okungokomzwelo okudlula noma yiliphi isu. Ubuholi obucabangayo, amathiphu, amavidiyo wokuchaza, amavidiyo obufakazi… konke ukuxhumana ngokuxhumana nezethameli zakho futhi kudingeka kakhulu nsuku zonke. Ukungasho ukuthi abantu bavame ukusesha amavidiyo kakhulu kunanoma iyiphi enye indlela!
imeyili - ukuhlehlisa umlayezo wakho kobhalisile kunenye yezinzuzo eziphakeme kunanoma yiliphi isu lokuthengisa lokuqukethwe. Ngokuvamile ukuthumela ama-imeyili amathemba akho namakhasimende akho, imilayezo yakho inikeza kokubili ukubaluleka nesikhumbuzo sokuthi ukhona lapho bakudinga khona. Wonke lawa amanye amasu angashayela abantu bakumkhiqizo wakho abakulungele ukuthenga… kulapho-ke lapho ufuna ukuqinisekisa ukuthi babhalisela i-imeyili yakho. Lonke isu lokuqukethwe kumele libe nesu lokumaketha nge-imeyili lokukhulisa nokushayela ababhalisile abakhona ekuguqukeni.
Ungayakha Kanjani Isu Lokumaketha Lokuqukethwe
Ngokumangazayo, isinyathelo sokuqala esisithathayo lapho sisebenza namakhasimende akukhona ukucwaninga nokuthuthukiswa kwekhalenda lokuqukethwe. Isinyathelo sethu sokuqala sihlaziya isiza sabo samanje kanye negunya eliku-inthanethi ukuqinisekisa ukuthi bangahola isivakashi sokumaketha kokucinga, umlandeli wezokuxhumana noma umlandeli, noma esinye isivakashi ngenqubo yokuhola phambili. Nayi eminye imibuzo esifuna izimpendulo zayo:
Ingabe ikhona i indlela eya ekuguqulweni kuzo zonke izingcezu zokuqukethwe eziqhubela umfundi esenzweni ofisa ukuthi basithathe?
Is analytics kufakwe kahle ukuqinisekisa ukuthi ungalinganisa umthelela wokumaketha kwakho kokuqukethwe ubuyele emthonjeni?
Ngabe isiza sakho silungiselelwe kahle ukuze okuqukethwe okuthuthukisayo kutholakale kwimiphumela efanele yenjini yokusesha? Ukusebenza kwe-injini yokusesha kuyisisekelo sanoma iliphi isu lokuqukethwe.
Ingabe okuqukethwe kuyakhonjiswa futhi kulungiselelwe ukuze kwabelwane kalula ngakho ezinkundleni zokuxhumana? Ukukhulisa ozokuthola kokuxhumana nomphakathi kungakhuphula ukuvakasha kwakho, ukuguqulwa kanye nokubekwa kwakho kwenjini yokusesha.
Ingabe okuqukethwe kungaboniswa ngokufanele kuselula noma kuthebhulethi? Amanye amaklayenti ethu abona ngaphezulu kwe-40% yethrafikhi yabo evela kuselula!
Lapho nje leso sisekelo sesivele sisebenza, sisebenza ukucwaninga okuqukethwe abancintisana nabo abawinayo, ukwakha isu elizokusiza ukuncintisana, nokwakha ikhalenda lokuqukethwe elizoshayela umfutho owudinga ukwehlisa izindleko ngokuhola ngakunye (CPL) ngenkathi uqhubeka nokwandisa i- isabelo sezwi (I-SOV), ukushayela nokwenza ngcono inani lokuguqulwa, futhi ekugcineni ukwandise okwakho kwe- buyela ekutshalweni kwezimali ngokuhamba kwesikhathi.
Ukumaketha kokuqukethwe okungokwemvelo kungathatha isikhathi esithe xaxa lapho inkampani yakho ikhululekile ngayo, ngakho-ke ukusheshisa isu lakho lokumaketha okuqukethwe ukukhangisa nokukhokhelwa okukhokhelwayo kanye namasu obudlelwano bomphakathi angakusiza ukuthi uthole eminye imikhondo eminingi ngokushesha okukhulu, hlola nokukala amasu akho kahle, futhi wandise izithameli zakho kanye nomthelela ngempumelelo.
Sidinga Okuqukethwe Okungakanani?
Umama wayo yonke imibuzo ebuzwa ngamakhasimende. Isifaniso sami yilesi… ukumaketha okuqukethwe umjaho. Ukungibuza ukuthi kudingeka okuqukethwe okungakanani kufana nokubuza umshayeli wemoto yomjaho bangahamba kancane kangakanani ukuwina. Lapho injini ishungelwe kahle, iba ngcono amasondo, umshayeli unethalente - imiphumela iba ngcono.
Ukumaketha kokuqukethwe kudinga ukuzijwayeza, ukuhlola, nokwenza ngcono okuqhubekayo ukuze ushaye izimbangi zakho! Akukona okokukhiqiza okuqukethwe okuningi, kumayelana nokwakhiwa kwelabhulali echaziwe yokuqukethwe ehlanganisa zonke izigaba zohambo lomthengi ukusiza ukumqondisa ekuguqukeni.
Kubiza Kangakanani Ukukhangisa Okuqukethwe?
Enye doozy yombuzo! Sincoma isabelomali esiyisicaba esisabalalisiwe ubudlelwane bomphakathi, ukukhushulwa, kanye nokukhiqizwa kokuqukethwe ukuze izinkampani ziqale. Lokho kungabiza kakhulu ($ 15k US ngenyanga) kepha kuyisisekelo esaziyo ukuthi sisebenza kahle. Ungaqala futhi ngaphandle kwe-PR nokwenyusa, kuthatha isikhathi eside ukukhuphuka.
Ezinyangeni ezimbalwa, kufanele uqale ukubona umfutho kanye nokuhola okuqhutshwa ngaphakathi. Phakathi nonyaka kufanele ukwazi ukuchaza ngokuphelele uhlelo lwakho futhi uqonde izindleko ezihilelekile ekuholeni ngakunye. Ngemuva kwalokho ungashintsha futhi ulinganisele isabelomali sakho phakathi kokuthuthuka kokuqukethwe, ukukhushulwa, kanye nobudlelwano bomphakathi ukukhulisa umthelela, ukunciphisa izindleko zakho ngokuhola ngakunye, bese ushayela ukuhola okuningi noma ukuguqulwa.
Khumbula ukuthi izimbangi zakho zilungisa isu lazo lokuthengisa ngasikhathi sinye, ngakho-ke umncintiswano ungakhuphuka noma wehle - okufuna ukuthi ulungise isabelomali sakho nokulindelwe ngokufanele. Sinamakhasimende alawula ukumakethwa kokuqukethwe ngoba kunokuntuleka komncintiswano, futhi sinamakhasimende ashiya lo mncintiswano ngenxa nje yokuthi awakwazi ukufana nezinsizakusebenza ezincintisana nabo. Isu elihle njalo lingaqala ukukhipha umncintiswano, noma kunjalo!
Tags: isu lokubhulogaikhalenda lokuqukethweukuthuthukiswa kokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweamasu wokuthengisa okuqukethweukukhushulwa kokuqukethweukuguqulwaisu lokubloga ezinkampaniizindleko ngokuhola ngakunyeimeyiliisu le-imeyiliividiyo echazayosidinga okuqukethwe okungakananikubiza malini ukumaketha okuqukethweAmavidiyo Wokumakethaprisu lesethuloUkukhuthazwaezimayelana Nomphakathiquicksproutbuyela ekutshalweni kwezimaliisabelo sezwii-slideshareizinhlobo zokumaketha kokuqukethweisu levidiyokuyinikuyini ukumaketha kokuqukethweisu labamhlophe
Amathiphu ama-5 Wokubhekana Nabezindaba Njengomthombo Wezazi